स्वास्थ्य-जीवनशैली Archives – Page 178 of 181 – Samacharpati Samacharpati स्वास्थ्य-जीवनशैली Archives – Page 178 of 181 – Samacharpati
मुटु रोग कसलाई, किन र कसरी लाग्न सक्छ ? मुटु रोगबाट कसरी बच्ने ? जान्नुहोस्
पहिले पहिले मुटुरोगलाई पाका मान्छेहरुको रोग मानिन्थ्यो । तर पछिल्लो समयमा मुटु रोग किशोर तथा युवाअवस्थाकै मानिसहरुमा समेत डरलाग्दो गरि फैलिएको पाइन्छ ।मुटु रोग विश्वमा धेरै मानिसको ज्यान लिने प्रमुख रोग हो । त्यसकारण यसप्रति सावधान हुनैपर्छ । प्रायः गम्भीर अवस्थामा पुग्नुभन्दा अगाडि नै आफुलाई मुटुरोग रहेको कुरा थाहा पाउन सकिन्छ, केही लक्षणहरुको आधारमा । […]
पोखरा, १५ असोज । सिद्धार्थ क्लब पोखराले पोखरा महानगरपालिका वडा कार्यालयका अध्यक्ष श्री तिर्थ राज अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यतामा पोखरा बृद्धाश्रम, पोखरा १७ सितापाइलामा स्वास्थ्य उपचार सहयोग कोष स्थापना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै प्रमुख अतिथि तिर्थ राज अधिकारीले पोखरा वृद्धाश्रम जिवन्त राख्न वडा कार्यालयले सहयोग गर्नै प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै आश्रमको विस्तृत योजना […]
काठमाडौँ, १४ असाेज । केरा निकै मिठो र स्वास्थ्यको लागी गुणकारी फल हो । यसमा हाम्रो स्वास्थ्यको लागी आवश्यक ३ वटा प्राकृतिक सुगर पाइन्छ । ती हुन् ,सुक्रोज फ्रुकोज र ग्लुकोज । त्यस्तै केराको कोसा बाहेक यसको बुङ्गो पनि हाम्रो लागी फाइदाजनक हुन्छ । यसले स्वालमा मात्र नभइ स्वास्थका लागी पनि उत्तिकै उपयोगी काम गर्छ […]
काठमान्डाैँ, १४ असाेज । उच्च रक्तचाप भएजस्तै कतिपयलाई ब्लड प्रेसर लो हुने गर्छ। रक्तचाप न्यून भएका बिरामीहरुलाई पनि समान हेरचाह र जीवनशैली परिवर्तन आवश्यक पर्छ भन्नेमा धेरैलाई थाह नहुन सक्छ। तपाई वा तपाईको कोही आफन्तजन न्यून छ भने तपाईले निम्न उल्लेखित तरिका अप्नाउन सक्नुहुन्छ। मदिरा त्याग्ने र बढी पानी पिउनेः मदिरा पिउदा रक्तचाप बढ्छ भन्ने धारणा पनि […]
पाेखरा, १४ असाेज । पहिले पहिले मुटुरोगलाई पाका मान्छेहरुको रोग मानिन्थ्यो । तर पछिल्लो समयमा मुटु रोग किशोर तथा युवाअवस्थाकै मानिसहरुमा समेत डरलाग्दो गरि फैलिएको पाइन्छ । मुटु रोग विश्वमा धेरै मानिसको ज्यान लिने प्रमुख रोग हो । त्यसकारण यसप्रति सावधान हुनैपर्छ । प्रायः गम्भीर अवस्थामा पुग्नुभन्दा अगाडि नै आफुलाई मुटुरोग रहेको कुरा थाहा पाउन सकिन्छ, […]